Galmudug iyo Ahlu-sunna oo maanta shir xasaasi ah uga furmaya magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Galmudug iyo Ahlu-sunna oo maanta shir xasaasi ah uga furmaya magaalada Muqdisho
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uu shir uga furmo maamulada Galmudug iyo Ahlu-sunna Waljameeca, iyadoona shirkaasi ay garwadeen ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya.
Wufuudda shirkaan u mataleeysa labada dhinac ayaa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana maanta la gudda geli doonnaa ajendaha shirka, iyadoona waxyaabaha la isku haayo si toos ah looga hadli doonno.
Ahlu-sunna ayaa tabasho badan dhankeeda jirta, waxaana ay dooneysaa in kaalin mug leh ay ka qaadato maamulka Galmudug.
Inkastoo doorashada Galmudug dib loo dhigay Ahlu-sunna waxay quudareyneysaa in xildhibaannada qaar dhankeeda laga dhigo, wasiirada kuraasta ugu muhiimsan la siiyo, madaxweyne-na waa ay isku rajeynayaan.
Galmudug madaxdeeda waxay sheegayaan iney diyaar u yihiin dhankooda iney sameeyaan wax walbo oo shacabka Galmudug gacmaha isku qabsan karaan.